GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Ụlọ akwụkwọ ahụ Pleto rụrụ dịruru narị afọ itoolu. Mgbe ahụ ọ dị, a nọ na ya akụziri ọtụtụ ndị ihe ndị ahụ Pleto kweere. Ọ bụ otú a ka ihe ndị ahụ ọ na-akụzi si gbasaa ebe niile ndị Gris na ndị Rom chịrị. Onye Juu bụ́ ọkà ihe ọmụma aha ya bụ Filo na ọtụtụ ndị isi chọọchị dị iche iche bịara kweta na ihe Pleto na-akụzi bụ eziokwu. Ha bidokwara kụziwe ya. Ọ bụ otú a ka e si malite ịkụzi na mkpụrụ obi anaghị anwụ anwụ n’okpukpe ndị Juu nakwa na chọọchị dị iche iche. A malitekwara ịkụzi ozizi ndị ọgọ mmụọ ndị ọzọ.
Otu akwụkwọ na-akọwa okwu ndị dị na Baịbụl kwuru na ebe e si nweta ọtụtụ ihe ndị chọọchị kweere taa bụ n’ozizi ndị Gris, nke ka nke n’ihe ndị ahụ Pleto kụziri. Ọ bụ ihe ndị ahụ ọ kụziri ka ndị isi chọọchị ụfọdụ na-akụzi. Ka anyị lee ihe akwụkwọ ụfọdụ kwuru.